Idzi nomwe pfungwa dzepfungwa dzeMunhu - AFRIKHEPRI
Chitatu, Kubvumbi 8, 2020
Raibhurari Yokuvandudza Kwemunhu (PDF)
Raibhurari yemashiripiti uye esotericism (PDF)
Dzidzo yeLibhaibheri muNew Age (PDF)
Anozivikanwa nokuda kwezvinhu zvayo aphrodisiac, ginger rinowedzera kudya
Chili, kiyi nyowani yekurwisa kufutisa
Sayenzi noupenyu: utano
Kunobva kuAfrica kurambidzwa kudya inguruve
Nzira yekuita sei zvirwere zvemuviri wako?
Soursop yaizova yakakosha kupfuura chemotherapy mukurwisa kenza
Kufunda kweRussia kunoratidzira GMOs ichasimbisa hutano hwevanhu mushure memazera matatu
Acai berry yekuremerwa uremu uye inodzivirira kubva kuchirwere chemoyo neshuga
Zvinyorwa zveIjipiti - Alexandre Moret (PDF)
Chakra Chinyorwa (PDF)
Bhuku jena N ° 1 (PDF)
Funga uye uve akapfuma - Napoleon Hill (PDF)
Nyika Isina Kenza, Iyo Nhoroondo yeVitamin B17 (PDF)
Simba remukati iyezvino - Eckhart Tolle (PDF)
Mitemo inokosha yeanosophy - Annie Besant (PDF)
Chakavanzika chekare cheruva yehupenyu - Vhoriyamu 1 (PDF)
Tarisa Hondo Yakanakisisa (2000)
Tarisa Muchato weGore (2014)
Tarisa Misodzi Yezuva (2003)
Cherechedza Zvakananga Outta Compton (2015)
Tarisa Iwe Hauzourayi (2016)
Kutanga Kutanga Vakauraya Baba Vangu (2017)
Cherechedza Rudo & Mhando (2011)
Tarindira Isingazivikanwi BIG (2009)
Vatema mwari anthology
Nyora kuAfrican social network Afrikhepri
Kutonga kwevatema muEurope yekare
Shandisai magwaro kukurudzira tsika dzeAfrica
Hapana vanhu vakaderedzwa kuva varanda, hakuna vanhu vakasarudzwa, nyika isina kuvimbiswa naMwari
AFURAKA / AFURAITKAIT - Kwakabva izwi rekuti "Africa
Etymology yeAfrica mazita mazita
Mhosva yekutanga panyika
Kutanga kwezwi rokuti Kilimanjaro
Dravidian budiriro muIndia
Apollonius wokuTyana ndiye Kristu chaiye here?
Dzokera kumakabva kururamisiro netsika: Maat
Tsanangudzo yesayenzi yekuporesa kunoshamisa uye simba remunyengetero
Bhaibheri, kopi kana kupfuurira kwemagwaro echiSumerian?
ISIS: Kumuka kwaKristu Kunodzokera KuEkare yeEgipita
Jesu aive mutema uye wedzinza reAfrica, maererano nerunyowani huchangobva kuwanikwa
Kutanga kune yeBonde Matsenga eIsis
Chii chinonzi rudo kana kuti Kimuntu?
Marcus Garvey: Baba vekubatana kweAfrica kwevanhu
General History of Africa (Volume 4)
Shuwa yemurume mutema - Alain mabanckou
Imwe nyaya - Claude Ribbe
Kinky pasina chinetso
Chero bedzi ini ndiri mutema - Maya Angelou
MHURI WEVADZIDZI VEMBA
NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA
MASHOKO & IYE
VANHU VAKAFUNA AFRICAN AND SAGES
Philosophy uye Psychology Health and Medicine
HERE IYO DZIMBA YEMAHARA ROBOT YEMABHUKU YOKUONESA UYE KUDZVARA RAKO RUGWARO MUDZIMAI PANE imwe Minute
Hutanhamari hwekuzvishandura - Paramahansa Yogananda (Audio)
EHANG 184: YOKUTANGA DHOMBA YAKO YAKADZIDZA PANE PAUNOFANIRA
MUNYIKA 2020, HIGH SPEED INTERNET ICHICHAVA KUCHIVA KUNYANYA KUNA MUVILLAGES MU AFRICA
Pane mhinduro yemweya kune matambudziko ako ose - Wayne Dyer (Audio)
Christiane Taubira anotsvaga mubhadharo wedhipatimendi rekukunze kweFrance, vekutanga vehuranda
Zvakavanzika zvekunaka kwechokoti
Kubva uye nhoroondo yeBoogolan
Zvakanakira kashew oiri yebvudzi uye ganda
Ndeipi mitemo yakajeka yekuremekedza kukudziridza chishuwo chako
Heino nzira yekuve nayo mahara
Zvigadzirwa zveHalal muAfrica uye diaspora yayo
Mishonga shanu ichakubatsira kukura vhudzi rako nokukurumidza
Kurapa kwakanaka kubva kuSahara
Sei maAfrica nema Africa-Americaans vachigara "vachikanganisika senge vasina kumbobvira"?
Michael Jackson: hupenyu hwe ngano - Documentary (2011)
Simba reChinangwa - Chinyorwa
Zeitgeist: Chokwadi chakavanzika - Chinyorwa
Kwame Nkrumah - Kudakwashe (2017)
Pane imwe nguva iyo humambo dzeAfrica - Zvinyorwa
Kuberekwazve - Rugwaro (2018)
Tribute kuna Johnny Clegg, iyo chena yeZulu (Vhidhiyo)
IGhana inotanga mune simba renyukireya uye inotanga nzvimbo chirongwa
United States, democracy uye inoshandisa mutongo werufu?
Dambudziko, chirongwa chekuedza kurwisa malaria (Malaria)
Ubongo vana, Katuni yekatuni mukutsvaga Africa
LOU JING: AFRO-CHINESE, VANHU VANHU VANHU VANOGADZIDZWA MUCHINHU CHOKUTANGA, VANOBATSIRA MUBVUNZO WOKUDZIDZA MUCHINA KUYE
SKATEBOARD NEVEHICLES NOKUDZIDZWA, KUTAURA KWEMUSORO
African Music Institute (AMI), chikoro chemimhanzi chakakurumbira chinovhura magonhi ayo kuGabon
Rudo Relationships - Eckhart Tolle (Audio)
Simba Rokuzvivimba - Brian Tracy
Kusvika Serenity - Eckhart Tollé (Audio)
Simba rekusaziva kwako - Joseph Murphy (Audio)
Izvozvi7 Zviito zveVaya Vanoziva Zvese Zvavanoita - Stephen Covey (Audio)
Mavambo ehupenyu hwevanhu maererano nemapiritsi eSumerian - Chikamu chechipiri (Audio)
Mitemo yePfungwa - Dan Millman (Audio)
Idzi nomwe danidzo dzepfungwa dzeMunhu
mu UZIMWE NEZVAKRISTU
Ba inomiririrwa muchimiro cheshiri Tomb. 359 muDeir El Medina
Chii chaunoita iwe?
Iwe wapindura "Ndidzo nomwe dzinofungidzira dzeMunhu" Maminitsi mashoma apfuura
Liye vaIjipita vaitenda kuti munhu wese aigadzirwa nezvinhu zvinomwe: muviri, zita, mumvuri moyo, akh, ba uye ka. Mamwe emazwi aya akaomarara kubata nekuti idzi pfungwa hadziwanike mumuviri wedu wepfungwa, mweya nemweya. Mashoko eAkh, Ba naKa anotaura kune zvikamu zvechikamu chemweya chevarume
Inomiririrwa seshiri ine musoro wemunhu, ba iri isimba rekutaurirana, shanduko uye kufamba kwemunhu wega. Sezvinei nevanhu, vamwari vanogonawo kuve naBa kana kunyange akati wandei. Kana mwari apindira mune zvevanhu, zvikanzi baou wake (plural of ba) yamwari yaive kubasa. Nekudaro, mambo vaigona kutorwa seba dzamwari. Kune rimwe divi umwari hwaigona kuiswa neba reumwe huMwari.
Iyo midziyo djet (kana sab kana khet) muviri ndiyo inogamuchira yezvikamu zvehunhu zvakaita seba, ka, akh, mumvuri kana zita. Ichi chikonzero nei kuchengetedzwa kwayo kuchikosha uye kwaive kurangwa kwakanyanya kutya kuti muviri wake ugodzwe kana kutorerwa kutendeka kwake. Djet anova Khat, chitunha chinozova mammy, kana munhu akaita zvese zvekunamatira itsitsi pairi, izvo zvichizvidzivirira kubva mukuita kwenguva.Pasinei nokukosha kwayo, muviri wakanga usina unhu hwakasiyana nokuti chifananidzo kana chifananidzo chaigona kuchinja.
Iyo inomiririra iyo isingapindike kaviri yekuva uye inosanganisira masimba anokosha eimwe neimwe. Izwi rinoti ndere mudzi rinoreva 'chikafu' uye rakanyorwa hieroglyph richishandisa maoko maviri akasimudzwa. Kusiyana neBa, chinhu chine simba, iyo Ka inomiririra chinhu chakasimba. Ka akanga aripo pakati pavamwari nevarume. Zvisinei, vanamwari vaigara vaine vazhinji, somuenzaniso, Ra akanga ane gumi nemana, izvo zvaimiririra maitiro ose ehupenyu hwake.
Izwi iri rinowanzoshandurwa se "chinoshandurwa" nekushomeka kwechinhu chiri nani. Iri izwi rine hukama nemudzi weIjipita rinoreva kuti "kupenya" kana "rinobatsira". Kuti tivake pfungwa iyi, takashandisa hieroglyph inomiririra egret ibis ine yakasviba girini mapaini yaive nesimbi yairatidza. Iyi nhepfenyuro uye isingafi yaive yeimwe yezvisingaonekwi zveunhu. Iyo yakabatana nesheyo yesimba rekugadzira rinoshandiswa mumashiripiti.
Nekupa zita, munhu anozova murume, akasarudzika, anozivikanwa, chikamu cheizere nehukama hwake asi aine hunhu, chiziviso chakazivikanwa uye chinzvimbo. Iko kushanda kweiyo rite kunogona chete kuve nechokwadi kana uyo anowana anonzi. Varume uye vamwari vanovimba netsika, uye kuziva kwemazita ezvisikwa ndiwo mamiriro akakosha ekuita pasirese. Simba rinogona kuvepo rezita iri zvakare pfungwa yekusagadzikana. Maiguru vaiziva simba rakabatirana nekuziva zita racho. Nekuchichinja, kana nekuchishandisa mutsika dzimwe nguva zvisingataurike mhedzisiro, zvakakwanisa kurwisa munhu akasarudzwa. Pakupedzisira, kudzima zita remunhu pane zvivakwa zvake (izvo zvakaitirwa Akhenaton) zvakangoitika kwete mukubvisa kuyeuka kwake munyika inoonekwa asiwo kumurambidza kuvepo mune imwe. Ichi ndicho chikonzero pakanga paine mhemberero dzakawanda, mubhuku rekufema semuenzaniso, iyo yakasimbisa kuchengetedza kwezita.
Mwoyo zvese zviri zvigaro zvekufunga uye kuziva asi zviri pamusoro pese kunowanikwa ndangariro izvo zvinokwanisa kupupurira pamberi pevatongi. Moyo wakadzoserwa kuna mommy mushure mekuramba. Kana akafa, mushakabvu aisakwanisa kumiswa pamberi pedare, ndosaka mushakabvu aive nemoyo wakatsiva uyo wakatora fomu kana iwo we scarabani uye pamakanyorwa zvakatorwa mu "Bhuku revakafa" . Kuruboshwe, moyo wemufi wakaiswa naHorus pane pani inoremera apo Anubis anotarisa kuti moyo wakareruka kupfuura minhenga yaMaât
Ichi ndechimwe chezvinhu zvinoonekwa zvemunhu izvo zvinokanganisika kubva kwaari kubva pakuzvarwa uye zvinoramba zviripo muKwake nyangwe akafa. Iri "Bhuku revakafa" rinotora chitsauko 92 kurondedzera kutenderera kwaro mukati mekambani yeBa masikati. Zvinoita sekuti vamwari vacho vane mumvuri sezvo Akhenaten akavaka tembere inonzi "mumvuri weZuva"
Iri rakatsanangurwa bhuku reIjipita revakafa
1 nyowani kubva pa21,00 €
kubvira raApril 7, 2020 10:29
Shandura mumutauro wako
Dzvanya apa kuvhara iyi meseji!
Chinyorwa ichi chakagovaniswa makumi masere nematanhatu!
Dzvanya apa kutumira chinyorwa chako futi ...
Joinha iyo 2.7k Twitter vanyori!
Dzvanya apa kuti utiteedzerewo ...
Joinha 21k Facebook vanyori!
Iwe unoda kunyora pane ino saiti?
Dzvanya apa kutumira chinyorwa futi ...
Joinha iyo 29 LinkedIn vanyoresa!